Global Convention | ASTA Myanmar
ASTA Global Convention ခရီးသွားပြပွဲ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် မှ ၂၇ ရက်ထိ) တွင် Myanmar Chapter ဦးဆောင်ပြသခဲ့ခြင်း
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူမှ အမေရိကန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအား နှုတ်ခွန်းဆက် ဖိတ်ကြားခြင်း
ASTA Global Convention Fort Lauderdale USA
၁။ ASTA နှင့် မြန်မာ
American Society of Trade Advisors (ASTA) ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်နှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့တွင် တစ်ကြိမ်၊ ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားလိပ်ဟိုတယ်တွင် တစ်ကြိမ် – ၂ ကြိမ်တိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ASTA Chapter ဖွဲ့စည်းရန်ကိစ္စ အမေရိကန်ခရီးသွား လုပ်ငန်းများ ပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာရေးခရီးများ စီစဉ်ရန်ကိစ္စနှင့် နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေး သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
ASTA နှင့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် (MTF) ၊ ASTA နှင့် မြန်မာခရီးသွားဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ (MTM) ၊ ASTA နှင့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (UMTA) တို့လည်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ Myanmar ASTA ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ
Agenda #1 : အမေရိကန်နှင့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ စ၍ နှစ်နှိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်။
Agenda #2 : မြန်မာကို အမေရိကန်များ ပိုမိုသိရှိရန်။
Agenda #3 : အမှန်တကယ် ခရီးစဉ်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် မြန်မာလေ့လာရေးခရီးစဉ်များ စီစဉ်ပေးရန်။
Agenda #4 : 2020 ASTA Global Convention at Washington အပါအဝင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ရန်။
Agenda #5 : ASTA Destination Expo ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန်။
၃။ Myanmar@ ASTA Global Convention AtaGlance :
1. AWARDS : MYANMAR = THE BEST INTERNATIONAL CHAPTER
2. Largest Participation among all Chapter Companies and Organization
3. Speaker by Invitation to Education Session Panel Discussion : It’saSmall World : Global Market Trends 2020 and Beyond that May Affect you.
ASTA Global Convention ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ Fort Lauderdale မြို့ (Miami) တွင် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် မှ ၂၇ ရက် နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၄။ မြန်မာ ASTA မှ ဦးဆောင်ပြီၤး ပြခန်း ၆ ခု တွဲယူပြီး ကုမ္ပဏီ ၁၃ ခု
Board of Director (BOD) List attended at AGC, Fort Lauderdale
1.U Kyaw Bhone Naing ChapterPresident Global Asia Myanmar
2.U Aye Min Oo Vice President EU/US Digital Marketing
3.Daw Sandar Aung Vice President Great Golden Empire Co., Ltd.
4.U Ye Tun Oo BOD Vivo Myanmar DMC
5.U Sammy Samuels BOD Myanmar Shalom Travels & Tours
6.U Zaw Win BOD TZK Hotels & Tours
7.Daw Tint Tint Lwin Honourable BOD Tint Tint Myanmar Group of Companies
8.Daw San Saint Saint Aye Joint Secretary Myanmar Ever Bright Star Travels & Tours
9.U Min Din Columbus Travels
10.Daw Su Chit World Myanmar
11.Daw Khet Khet Han White Culture Travels & Tours
12.Daw Amara Aung Treasure Myanmar Alpha Travels & Tours
13.Daw Kay Zin Sincerity General Travel Services
Remark : “Myanmar Myat Cherry” joined as the Trade Visitor.
၅။ ပြပွဲပါဝင်ပြသမှုနှင့် အဆင့်ဆင့်
ပြပွဲမတိုင်မှီASTA မှ ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Bob Duglin နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို Fort Lauderdale The Diplomatic Beach Resort တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(I) Cultural & Heritage Tour အား FAM Trip အနေဖြင့်ရော၊ City Tour အနေဖြင့်ပါ လိုက်ပါ လည်ပတ်ခဲ့ ပါသည်။
(II) Sawgrass Recreation Eco Tour ကိုလည်း လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် Chapter Connections နှင့် Community Networking ပွဲကို ကျင်းပပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ The Best International Chapter နဲ့ The Best President Of the year ဆုကို Chapter President ဦးကျော်ဖုန်းနိုင်မှ လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ASTA သို့ ဝင်ရောက်သူများသည် ကနေဒါထက်ပင် ပိုများပြီး နိုင်ငံတကာအသင်း Chapter ၁၂၀ တွင် အများဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်သော Chapter ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက ဒု-ဥက္ကဌ ဦးဆောင်သော FAM Trip တွင် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆွဲဆောင်နိုင်မှုများ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ယခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Chapter အဖြစ် ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Bob Drghlin က ပြောကြားပေးအပ်ပါသည်။
Vice President’s Words : (Myanmar has) over 160 members – Absolutely Amazing!
– A country on the rise.
– More trade show participants than any other Company or any other organization – that is Extra Ordinary
– Everybody from that country files 30 hrs to be here.
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ တက်ရောက်သူ ၃၀၀ နှင့် ဖွင့်လှစ်သည်။ ဖွင့်ပွဲတွင် Tom Krieglstein မှ နာရီ ၃၀ ကျော် လေယာဉ်စီးလာရသော မြန်မာများ လက်ထောင်ပါဟု တောင်းဆိုချိန်တွင် ပရိတ်သတ်ကြီးမှ လက်ခုပ်တီးသြဘာပေး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။
Education Session တစ်ခုဖြစ်သော “It’sasmall world Global Market Trends in 2020 Beyond that may affect you” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးသော Panel Discussion တွင် မြန်မာပြည်မှ Speaker အဖြစ် ဦးအေးမင်းဦး ဖိတ်ကြားခံရ၍ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ အခန်းပြည့်အောင် တက်ရောက် အားပေးကြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာသေးခင်က FAM Trip လာရောက်ခဲ့သူ Mr. Alvin မှ လည်း ၎င်းကိုယ်တွေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အေးချမ်းသာယာနေပုံများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် All delegates General Session အပြီးတွင် Digital Marketing ဆိုင်ရာ Social Media Implementing Instagram to Boost your business ကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး Travel Wise International ၏ ပိုင်ရှင် Ms. Marielle Adriano နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မိမိတို့ မြန်မာအဖွဲ့မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသော Lunch and Learn session ကို Regency Ballroom3တွင် ASTA ၏ ဒု-ဥက္ကဌ Mr. Bob Drghlin နှင့် ASTA ၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ USA ရှိ ပြည်နယ် Chapter President များနှင့် တက်ရောက်လာသော Travel Advisor များ ခန်းမပြည့်ကြွရောက်အားပေးခဲ့ပြီး မိမိတို့ ဘက်မှ ဦးကျော်ဘုန်းနိုင်၊ ဒေါ်စန္ဒာအောင်၊ Sammy Samuel ၊ ဦးရဲထွန်းဦး၊ ဦးဇော်ဝင်းတို့က မြန်မာပြည်အကြောင်း
Power Point Slide များနှင့် ရှင်းပြခဲ့ကြပြီး ဒေါ်တင့်တင့်မှ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၏ အမေရိကန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအား နှုတ်ခွန်းဆက် ဖိတ်ကြားခြင်းကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကြွရောက်လာသူများကို မြန်မာ့လက်မှုပညာအမှတ်တရ ပစ္စည်းများ မဲဖောက်ပေးပြီး နေ့လည်စာစားပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ပြီးစီးအဆုံးသတ် ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် နေ့လည် ၃ နာရီခွဲတွင် Zuckerberg Media ကို တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ၏ ညီမ Randi Zuckerberg ၏ အထူးတင်ဆက်မှုများဖြင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။ ပြပွဲအပြီး မှာတော့ လာရောက်ပြသကြသူ Myanmar ASTA Chapter အဖွဲ့များ ညနေစာစုပေါင်းစားကြပြီး အောင်ပွဲခံ ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြပွဲလာရောက်ပြသသူ မစုချစ်ကိုလည်း RFA သတင်းဌာနမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်ခဲ့ပြီး ASTA Myanmar Chapter ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးအေးမင်းဦးနှင့် Travel Wise International မှ ပိုင်ရှင်နှင့် President Mr. Adriano နှင့် ညီမ Marielle Adriano တို့ Washington တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံကာ မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးမြှင့် ကြော်ငြာရေး ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အစဉ်အလာကြီးမာသော ASTA Global Convention ပွဲကြီးတွင် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ စုပေါင်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော် အနက်မှ The Best International Chapter of the Year ဆုနှင့် Chapter President of the Year ဆု (၂) ဆု ရရှိခဲ့ပါသည်။ အကျိုးရလဒ်အဖြစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ စိတ်ဝင်စားမေးမြန်းမှုများစွာ ရှိခဲ့ပြီး Tint Tint Travel & Tour ကုမ္ပဏီနှင့် ညောင်ဦးဖီးကျွန်းဟိုတယ်များသို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြပြီးကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးပိုမို အားကောင်းလာစေရန် ရည်သန်လျက် အမေရိကန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပညာရေးလေ့လာရေးခရီးစဉ်များ တိုးချဲ့ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်သွားရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝါရှင်တန်တွင် ကျင်းပမည့် ASTA Global Convention တက်ရောက်ရန်နှင့် ASTA Destination Expo ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည့်အကြောင်း လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ASTA Myanmar Chapter